umzimba wethu - kuyinto isimiso esiyinkimbinkimbi kungaba ukuvikela kahle ngokwabo emathonyeni angaphandle. Kodwa emhlabeni ziningi nezilwanyana ezincane pathogenic kanye isikhunta ufuna ithuba aphule izithiyo okuvikela umzimba futhi ulisebenzise izidingo zabo siqu. Izimpawu ze-la magciwane protozoan izifo fungal. Lesi sifo akusilo eyingozi kakhulu, kodwa kunciphisa kakhulu izinga lokuphila, njengoba kubangela ukungakhululeki ezinzima nezinkinga eziningi yezimonyo.
Yiziphi fungal izifo? Lokhu isifo sesikhumba nezinzipho, izinwele kanye izitho zangaphakathi, okuyizinto ejenti causative isikhunta ezihlobene microflora pathogenic. kukhona izidakamizwa ezinjalo ku unogada ngempilo njengoba "Irunine". Analogue, izindleko kanye nomkhakha we isinyathelo, sizocabangela namuhla.
Kuyini izidakamizwa "Irunine"
Lena ngokuyinhloko umenzeli antifungal ka ezibanzi-bohlu. The main isithako - itraconazole - kwephula ubuqotho isikhunta pathogenic iphinde ivimbele ukwanda kwabo. Ngakho kukhona nezilwanyana ezincane okuyizinto ucishe nozwelo ketshezi. Indlela ephumelela kakhulu kuphambene dermatomitsetami, isikhunta sikhuntile, imvubelo Candida hlobo. Nokho, emakethe akulona kuphela "Irunine". Analogs ukunikeza inkululeko ebanzi ekukhetheni kanye nekhono ulungise izindleko zokwelapha. Ngezansi sithatha sihlolisise range intengo lezi imithi.
Ake sibheke lo mshini wezenzo "Irunine" izidakamizwa. Yokusetshenziswa (intengo izidakamizwa akusho izinga ezimbi) owethulayo nathi ngokuqondile njengoba antifungal izidakamizwa ezibanzi-bohlu. isithako iphula ngibone umjikelezo wokuphila kwe-fungus, kwaphazamiseka ukukhiqizwa ergosterol ulwelwesi amaseli. Umuthi ngempumelelo ebulala inqwaba kwezinhlobo ezahlukene isikhunta. Umkhawulo igazi lokuhlushwa safinyelela ngemva cishe 4 h. imikhiqizo noqhekeko ziyasuswa ngokuphelele ngaphandle komzimba mayelana 7 izinsuku emva ukumisa ukwelashwa. Esikhathini epidermis lokuhlushwa zokwelapha imayelana eyodwa ngenyanga. Nail yi-keratin izidakamizwa ziyoba namandla alo ukuphulukiswa cishe 200 izinsuku emva kokuphela Yiqiniso sezinsuku ezingu-90 zokwelashwa.
lisetshenziselwa Kuphi "Irunine" (okufanayo)? It nezesikhumba (it is avame engabelwe umbandamu futhi pityriasis versicolor) and zabesifazane. Inkinga yokuqala kakhulu ukuthi abesifazane ujike yokubonisana, kuba candidiasis (noma thrush). izidakamizwa ngempumelelo Ikakhulukazi candidiasis nge izilonda lwamafinyila kanye isikhumba, onychomycosis, inkwethu vulvovaginal. Kulokhu kuba "Irunine" inikezwa kaningi. Analogs kancane zingaphansi kwakhe e ngempumelelo kodwa ngaphansi obala izindlela.
Nokho, ekwakhiweni "Irunine" alinakunikezwa kuzo zonke izimo. Ukusetshenziswa Its ezinganeni akuvunyelwe nhlobo, njengoba esasenqatshelwe senyanga yokuqala sokukhulelwa. Kusukela ngenyanga 4th yokukhulelwa, le imithi kungenzeka iqondiswa kuphela uma inzuzo elindelekile ukuba unina ingaphezu kwe-engaba ingozi embungwini. Udokotela kufanele niqaphele kakhulu, ukuba linqume kubantu abaphethwe yisifo senhliziyo, nesifo samaphaphu kanye ipheshana zokuphefumula, ezinzima isibindi isifo.
Ziyakwazi sina ngempela, ngakho kufanele bahlolisise uhlu kubo ngaphambi kokwenza isinqumo ngokuthatha izidakamizwa. amaphilisi Antifungal ngenxa spectrum ebanzi isinyathelo, hhayi kuphela kungase kubangele side effects ahlukahlukene, kodwa futhi kuthinte cishe wonke izinhlelo ezibalulekile. Ngaphezu kwalokho, ngamunye wabo angaphendula okunhlobonhlobo. Ngakho, isimiso sokugaya ukudla bungene ngokuvamile esabela imiphumela zomuthi in iziyaluyalu ahlukahlukene futhi kuyaqabukela - adakwe isifo sesibindi. Isimiso sezinzwa esiyinhloko ngokuvamile obhekene migraine ukuhlaselwa, ukozela nesiyezi. Ngo abesifazane, kungase kube ukwehluleka nomjikelezo wokuya esikhathini. Kube komzimba ezifana ukuqubuka, edema yamaphaphu kungenzeka.
Kufanele kuqashelwe ukuthi amaphilisi kakhulu antifungal bubekezelelwa kahle, kodwa yimiphi imiphumela emibi kungenzeka nge ntshashintshe ecatshangelwayo. Ngakho-ke, ukwenza akazibekanga medicate futhi kudokotela uyofuna icebiso, abayoba khetha ithuluzi elifanele kakhulu ngawe.
Khipha ifomu indlela yokuphathwa
Ethandwa kakhulu amaphilisi antifungal kukhona "Irunine". Yokusetshenziswa kusikisela ukuthi izidakamizwa kuyinto amaphilisi round aphuzi okufanele sisetshenziswe, ngokuvumelana isikimu ngenhla. Lapho vulvovaginitis candidal - ka 0.2 g kabili ngosuku, ne pityriasis versicolor umthamo kungenziwa aba nguhhafu. Umthamo ofanayo (0.2 g kanye ngosuku) lilondolozwe ekwelapheni keratitis fungal, tinea. Kwezinye izimo kutuswa ukunciphisa umthamo 0.1 amagremu ngosuku. Kungenxa izifo ezifana candidiasis temlomo na fungal Izilonda.
Eyesibili ngomthamo ifomu - lokhu ikhandlela "Irunine". Basuke engabelwe thrush. Sokuphuzisa zakudala: nsuku zonke ngaphambi kokulala kufanele ufake ikhandlela ezijulile sangasese. Ubude besikhathi sokwelashwa ngokuvamile hhayi amasonto angaphezu kwamabili. Uma uku yenza ngokuphelelwa yithemba ukuthola ikhambi lenkinga obucayi, cela udokotela wakho mayelana nokwenzeka usebenzisa izidakamizwa "Irunine". suppositories kwesitho sangasese kuphumelela kakhulu ukulwa nezifo ezifana candidiasis.
Kuze kube manje, ulwazi ukweqisa izidakamizwa kubikiwe ngisho nakanye. Nokho, kumelwe sikhumbule ukuthi akunandlela yokugqashula umbuso udokotela, kanye ukwandisa umthamo. Uma kukhona izinsolo ukusetshenziswa ngemithamo enkulu izidakamizwa ukuba lavage esiswini futhi unike isebenze namalahle indoda. Ayikho isihlungu, njengoba ukusetshenziswa ebulilini zomuthi esisongela ukuphila kwakho ngeke. Naphezu kwakho konke lokhu, kubalulekile ukuba ukuqhuba yokwelapha okubuyisela.
Yeka ukuthi kuyinto "Irunine"
Against ngemuva imikhiqizo touted kakhulu "Diflucan" futhi ngendlela efanayo, intengo "Irunine" elinganiselayo ngempela. Izindleko ukupakisha amaphilisi ka 0.1 mg - 330 ruble. Omunye iphakethe iqukethe amaphilisi 14. Ngakho candidiasis iphathwa ekabili reception amaphilisi 0.2 g (ekuseni nakusihlwa), noma izinsuku ezintathu, eyodwa capsule ka 0.2 mg ngosuku. Njengoba ubona, kuba ukulungiselela kufinyeleleke kakhulu futhi ukonga "Irunine". Inani ithebhulethi ingeqi ruble angu-30.
Lapho pityriasis versicolor wesifunda sishintsha kancane, iqondiswa at 200 mg kanye ngelanga, le nqubo yokwelapha ithatha kuze kube izinsuku ezingu-7. I recalcitrant kakhulu yokwelapha isifo, ezifana aspergillosis, cryptococcosis, histoplasmosis, sporotrichosis, adinga Yiqiniso omude izinyanga ezimbili ngonyaka. Ngesikhathi suku isiguli akufanele kuthathe ngaphezu 200 mg zomuthi. Kodwa ngisho Kulokhu, ukwelashwa nge isidakamizwa "Irunine" kufinyeleleke ngokwanele. Inani amaphilisi cishe izikhathi 10 ephansi kunaleyo capsule "flucanozole", futhi ngokuvamile ezinqunyiwe thrush kanye nezinye izinkinga.
Lona izidakamizwa yasekuqaleni ngesisekelo okuyinto ke waqala ukuveza ezihlukahlukene imithi ejwayelekile, izidakamizwa okusho ukuthi zisekelwe izifundo zokwelapha wababe yayo yasekuqaleni. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela isidingo ukutshala isikhathi nemali ekuthuthukisweni yesikhathi eside ivumela abakhiqizi ukulondoloza intengo ikhange nakakhulu. Sesixoxile mayelana ukuthi kubiza malini "Irunine". Manje ukuqhathanisa, ake sibheke asesilinganisweni ngoba "Orungal". Ukuze okufanayo 14 amaphilisi wena unganikeli ruble esingaphansi 2500, okungenani kahlanu ezibizayo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi emakethe zikhona ezintathu zokuqala izidakamizwa antifungal. Lokhu "Orungal", okuyinto ngokukhethekile ekwelapheni isikhumba ukhunta linoboya (kungaba ekhanda, esifubeni noma emuva); "Lamisil" - ngokukhethekile ekwelapheni nail ukhunta futhi ngokuphelele engenamsebenzi ekwelapheni nolwelwesi lwamafinyila kanye izitho zangaphakathi - iyona mkhakha womsebenzi we "Diflucan". Ngebanga lalokho, "Orungal" lisetshenzisiwe nangokuqondene ukuze yelaphe izifo ezibangelwa fungal emlonyeni, sangasese, amathumbu bronchi.
Phakathi zonke emakethe izidakamizwa antifungal ethandwa kakhulu kuba "Irunine". Yokusetshenziswa, odokotela yangempela kanye neziguli - konke kuqinisekisa ukusebenza kahle eliphezulu futhi lithembekile izidakamizwa. Kunzima kakhulu ukuthola emakethe inhlanganisela ngakho okuhle ngaphezulu intengo nekhwalithi. Ngaphezu kwalezi esiyingqayizivele, odokotela bangakunikeza izidakamizwa "Itrazol", siseduzane kakhulu ukubaluleka futhi izobiza ruble 400 iphakethe ngalinye.
Enye Analogue esithandwayo "Orungamin". Izindleko imayelana kuyafana nomkhakha we isinyathelo. Enokwethenjelwa kakhulu Isidakamizwa antifungal "Orungal", akusiyo inketho eshibhe ukwelashwa, kodwa izifundo zokwelapha isikuqinisekisile nokusebenza ngendlela ephakeme kakhulu.
Kuphephile ukuqala ukwelashwa nomunye imithi, uma uthatha "Irunine"? Imiyalelo (intengo yale brand ekhangayo, ngakho ngonanzelelo ke) lisikisela ukuthi kwezinye izimo ngeke kudingeke kumiswe umncintiswano uma kukhona isidingo esiphuthumayo ukuthatha imithi. Kumayelana izidakamizwa ezifana rifampicin, rifabutin, phenytoin. Ngaphezu kwalokho, akusikho ukuthi ukuxhumana le mithi nge "Irunine" kuba nomthelela ongemuhle emzimbeni. Le mithi kusebenze umsebenzi enzyme isibindi, nakho kunciphisa ukusebenza kwe itraconazole.
Kunemithi ezisebusweni Kunalokho, ukwandisa ukusebenza we ketshezi esebenzayo "Irunine". It izidakamizwa ezifana erythromycin futhi ritonavir. Lihambisana antifungals awukwazi ukuthatha izidakamizwa ezifana terfenadine futhi astemizole, futhi haltsion flormidal, quinidine ophuzwayo, Zocor, lovastin, mizolastine, tsizaparid.
Nokukhulelwa kanye lactation
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, le usongo kokunqotshwa ngumuntu Candida ukhunta kabili. Kodwa ngalesi ukwelashwa isikhathi nge "Irunine" isidakamizwa akuvunyelwe nakancane. Ngeke zigcine zibulale ezingenzeka embungwini, kodwa futhi okukhulu kombungu ezinzima. Ngakho-ke, umama okhulelwe ukunikela ukwelashwa bangisekela usebenzisa amakhambi abantu. Phakathi umzimba laktatsiidetsky futhi uthola yonke imithi okuyinto uthola umama. Ngakho-ke, ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, ungenzi lutho imithi. Lokhu kufanele sikhumbule ukuthi zonke nabesifazane asebeneminyaka efanele yobudala zokuzala. Uma ebekiwe ukunakekelwa isikhathi eside njengoba izidakamizwa sina, khona-ke kubalulekile ukuvikela kwezindlela ezikahle ukuvimbela ukukhulelwa ngephutha. Lapho sebephothulile yokwelashwa kuze ukuhlela sokukhulelwa kufanele kube okungenani izinyanga ezintathu.
"Lycopodium" (isixazululi nkinga yehadiwe nezinsiza): izinkomba ukusetshenziswa, langempela
Cishe lesi sidakamizwa "Amlotop": Iziyalezo yokusetshenziswa ukuze kafushane nesineke